MWC 2020 ကို ဖျက်သိမ်းပြီးနောက်မှာ ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ သူတို့ဖုန်းတွေကို ဘယ်လိုမိတ်ဆက်သွားကြမလဲ ? | Anycall Mobile
RKhar Min Thant,5months ago2min read 117
MWC 2020 (Mobile World Congress) ကို လာမယ့် February လ 24 ရက်နေ့မှာ စတင်ကျင်းမှပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ Cancel လုပ်ခြင်းသာမခံရခဲ့ဘူးဆိုရင်ပေါ့။ အခုတော့ Corona Virus ရဲ့ ဝင်ရောက်မွှေနှောက်မှုကြောင့် ကျွန်တော်တို့ နည်းပညာဂျပိုးတွေ မျှော်လင့်စောင့်စားနေတဲ့ MWC 2020 ပွဲကြီးကို ရက်အကန့်အသတ်မရှိ Cancel လုပ်လိုက်ပါပြီ။ အဲ့ဒီပွဲကိုကျင်းပတဲ့ GSMA(GSM Association) အဖွဲ့ကလည်း ပြန်လည်ကျင်းပဖို့ ရှိမရှိဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာသတင်းမှ ထုတ်ပြန်ထားခြင်း လည်းမရှိပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် MWC 2020 ဟာ လုံးဝ Cancel ဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုရမှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် လာမယ့် MWC မှာပြသဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ ဖုန်းတွေကို သူတို့ရဲ့ ထုတ်လုပ်သူကုမ္ပဏီတွေက ဘယ်လို reschedule လုပ်လိုက်ကြသလဲ ဆိုတာကို အောက်မှာဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Oppo Find X2 (Photo-Internet)
Oppo က သူ့ရဲ့ Flagship ဖုန်းဖြစ်တဲ့ Find X2 ကို MWC 2020 မှာ စတင်မိတ်ဆက်ဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း MWC 2020 ဟာ Corona ကြောင့် cancel ဖြစ်သွားတော့ ဖေဖော်ဝါရီလအစား မတ်လမှာပြောင်းလဲပြီး မိတ်ဆက်လာမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဆိုပါဖုန်းမှာဆိုရင် Snapdragon 865 အပြင် 120Hz Refresh Rate ကိုပါ ထောက်ပံ့ပေးလာမယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် 5G Connectivity, 65W Wired Fast Charging နဲ့ 30W Wireless Charging ကိုပါထောက်ပံ့ပေးလာမှာမို့လို့ ဒီဖုန်းဟာ Oppo မှ Oppo ဆိုတဲ့သူတွေ အတွက် လက်လွှတ်မခံသင့်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်လာမှာပါ၊ သူ့ကိုတော့ နောက်လာမယ့် မတ်လအတွင်းမှာ မိတ်ဆက်လာတော့မယ်လို့လဲ သိရပါတယ်။
Realme X50 Pro – 24, Feb
Realme X50 Pro (Photo-Internet)
Realme ရဲ့ ဒုတိယမြောက် Flagship ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်လာမယ့် X50 Pro ကို MWC မှာစတင်မိတ်ဆက်ဖို့စီစဉ်ထားခဲ့တာပါ။ အခုအချိန်မှာ MWC ကို Cancel လုပ်လိုက်ပေမယ့်လည်း Realme ကတော့ Feb 24 ရက်မှာပဲ မိတ်ဆက်သွားမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် MWC လို Event မဟုတ်ပဲ Livestream အနေနဲ့သာ မိတ်ဆက်လာဖို့ များပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲမိတ်ဆက်ပါစေ ကျွန်တော်ကတော့ Snapdragon 865, Hexa Camera Setup, 90Hz ပါလာမယ့် ဈေးသက်သာတဲ့ Flagship ဖုန်းကို can’t wait to see ပါလို့ 🤩🤩
Xiaomi Mi 10 [Global] (အတိအကျမသိရသေး)
Xiaomi Mi 10 (Photo-Internet)
လွန်ခဲ့တဲ့ 13 ရက်နေ့က Xiaomi က သူ့ရဲ့ Mi 10 Series ကို တရုတ်ပြည်မှာ စတင်ပြီးကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အရင်ကလိုမျိုး Event တွေနဲ့ တသီးတသန့်ပွဲထုတ်လာတာမဟုတ်ပဲ Internet ပေါ်မှာ Live လွှင့်ပြီးမိတ်ဆက်ခဲ့တာပါ။ အဲ့တုန်းက မိတ်ဆက်ခဲ့သလောက်က Mi 10 နဲ့ Mi 10 Pro အပြင် Phone Charger တွေ Flip Case တွေအပြင် အခြား ဖုန်းဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေကိုပါမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ အရင် Series တွေကလိုမျိုး SE version ကိုတော့ ကြေညာသွားခြင်းမရှိပါဘူး။ အဲ့ပွဲအပြီးမှာ Xiaomi က သူ့ရဲ့ Mi 10 Global version ကို လာမယ့် Feb 23 ရက်နေ့က Barcelona မြို့မှာကျင်းပမယ့် MWC 2020 မှာ မိတ်ဆက်မယ်လို့ အတည်ပြုလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း MWC 2020 ဟာ Cancelled ဖြစ်သွားခဲ့ပြီမို့ Mi 10 ဟာလည်း အဲ့ရက်မှာ ကြေညာလာတော့မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် Xiaomi က ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး နောက်ထပ်ကြေညာမယ့်ရက်ကိုလည်း ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။
Huawei Mate XS (အတိအကျမသိရသေး)
Huawei Mate Xs(Photo-Internet)
Huawei ရဲ့ ပထမဆုံး Foldable ဖုန်းဖြစ်တဲ့ Mate X ကို လွန်ခဲ့တဲ့ February 2019 မှာစတင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အခုလည်း သူ့ရဲ့ နောက်မျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ Mate XS ကို MWC 2020 မှာ ထပ်မံကြေညာဖို့ ပြင်ဆင်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ March လထဲမှာ P40 Series ကိုကြေညာဖို့လုပ်ထားတာရှိတာမို့ Mate XS ကို ရှေ့ပြေးအဖြစ်လွှတ်မယ့်သဘောပါပဲ။ ဒါပေမယ့်လည်း MWC 2020 ကို Cancel လုပ်ခံရပြီးနောက်မှာ သူ့ရဲ့ အကြံတွေရွေ့ဆိုင်းလိုက်ရပါတယ်။ သူ့ကိုလည်းပဲ Huawei က မိတ်ဆက်ဖို့ရက်ကို ထပ်မံမကြေညာသေးတာမို့ P40 Series နဲ့အတူပဲ မိတ်ဆက်လာတော့မလားလို့ မေးခွန်းထုတ်စရာရှိလာပါပြီ။ ဘာပဲပြောပြော Huawei က Mate XS ကိုအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်မယ်လို့ စဉ်းစားထားတယ်ဆိုရင်တော့ မကြာခင်မှာပဲ ကြေညာလာနိုင်ဖွယ်ရှိနေပါတယ်။
Sony Xperia 1.1, 5Plus – 24, Feb
Sony Xperia 5Plus (Photo-OnLeaks)
Sony ဟာ ကင်မရာတွေထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ ဆရာကျတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုပါ။ သူဟာ ဖုန်းတွေအတွက်လဲ Image Sensor တွေထုတ်ပေးပါတယ်။ လတ်‌တလော နောက်ဆုံးထွက်ခဲ့တဲ့ Redmi K30 တို့ Poco X2 တို့မှာသုံးထားတဲ့ IMX 686 တို့ 586 တို့လိုမျိုး Image Sensor တွေကို ဖန်တီးပေးတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုပါ။ ဒါ့အပြင် သူက Xperia ဆိုတဲ့ Series နဲ့အတူ မိုဘိုင်းဖုန်း လောကကိုလဲ လမ်းဖောက်ထွင်လျှက် ရှိနေပါတယ်။
Sony ရဲ့ Xperia 1.1 နဲ့ Xperia 5Plus နှစ်လုံးစလုံးမှာ 5G Connectivity ပါဝင်လာမယ့်အပြင်၊ 8K video တွေကိုပါရိုက်ကူးပေးနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။OLED Display တွေကို အသုံးပြုပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခြား Xperia9လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ Mid-Ranger တစ်လုံးအကြောင်းကိုလဲ နားစွန်းနားစကြားရပါတယ်။ အဲ့ဖုန်းမှာ Snapdragon 765 သုံးလာမယ် ဆိုတာကလွဲပြီး တခြားဘာမှမသိရသေးပါဘူး။ အခုဖုန်းတွေကိုလဲ MWC မှာမိတ်ဆက်ပြသဖို့စီစဉ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး MWC Cancel လုပ်ခဲ့သည့်တိုင်အောင်မှ Sony ကနောက်ကိုမရွေ့ပဲ Feb 24 မှာပဲ Livestream Event ကနေတဆင့် မိတ်ဆက်ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်ကဖုန်းတွေကတော့ MWC 2020 မှာစတင်မိတ်ဆက်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားခဲ့ကြပြီး Corona Virus ဖြစ်ပွားလာမှုကြောင့် ပွဲကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ရခဲ့ပါတယ်။ အပေါ်ကဖုန်းတွေဟာ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ တတ်နိုင်သမျှ အစောဆုံးမိတ်ဆက်ရမယ့် အခွင့်အရေးကို လက်လွှတ်လိုက်ရတဲ့ ဖုန်းတွေပါပဲ။ သင်ရော ဒီသတင်းကို ဖတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ တရုတ်ဟာ နည်းပညာကစပြီး ကဏ္ဍစုံမှာ Key Player ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်နေတာကို သတိပြုမိပါရဲ့လား ? သင်ရော အဲ့ဒီအပေါ်မှာ ဘယ်လိုမြင်လဲ ? သင့်ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကို အောက်ကကွန်မန့်မှာ ချန်သွားခဲ့ပါဦး။
Tags	#Huawei	#MWC	#MWC 2020	#oppo	#Realme	#Sony	#Xiaomi
Follow-up news; 48 MP Quad Camera Setup နဲ့ Redmi Note 8
Realme Q Series ဆိုတာ Realme5Series ရဲ့ Re-branded Version တွေသာဖြစ်